Ambatoboeny : Miandry ny fampanjakana ny marina i Mounzir Ajij Ali
lundi, 29 novembre 2021 07:31
Ny alatsinainy 11 oktobra hifoha ny talata 12 oktobra 2021 dia nisy tranga fanolanan-jaza 8 taona tao Ambatoboeny, Faritra Boeny, Faritany Mahanjanga, ka namoy ny ainy ity zazavavy kely ity.
Nijoro ny tovolahy iray tao an-tanàna, Mounzir Ajij Ali, nanentana ny fokonolona hiaraka hikaroka ity nahavanon-doza, ka dia tratra ilay dokera nahiana nanao izao habibiana izao.
Nahare izany ireto Polisy dia nanaraka tany, ary dia natolotry ny fokonolona ny Polisy ilay mpanolana, ary avy dia nentina any Mahajanga hiarovana azy sao tratran'ny fitsaram-bahoaka.
Nanao fanambarana maromaro tamin'ny tambazotra serasera facebook anefa i Mounzir Ajij Ali fa tsy milamina ny fandriampahalemana eto Ambatoboeny, indrindra fa ny eo anivon'ny Polisim-pirenena, ka nangatahany ny anoloana ny tompon'andraikitra ao an-toerana.
Ahatairana anefa ny an'ny fokonolona sy ireo olona nanatri-maso maro, fa ny ny tolakandron'io fisamborana ilay mpanolana nahafaty zaza 8 taona ity, dia nosakanana, mbola nitondra moto, i Mounzir Ajij Ali, ka vao nijanona ary nipetraka ny béquille n'ny moto, dia polisy efa-dahy no nisambotra azy, ary avy dia namatotra azy rojovy, ka nentina tany amin'ny biraon'ny Polisy Ambatoboeny tampon-tanàna.
Nahare ny manodidina fa niantso vonjy fa vonoin'ny polisy tao amin'ny birao i Mounzir Ajij Ali. Maro ireo nijoro vavolombelona ary navoaka fahitalavitra mihitsy momba izany.
Raha ny filazan'ity tovolahy ity, dia nampandoalihina izy, ka nolakoana tamin'ny chevron, hazo kanota ny faladia-tongony roa, ary nolakoana ny lohany, izay feno mangana raha ny sary niparitaka teny amin'ny tambazotra-tserasera. Rovidrovitra ny akanjony, ary feno ratra ny vatany. Ny ompa reny sy ompa razana niraradraraka, raha ny filazan'ity tovolahy ity hatrany.
Tsy nijanona teo anefa izany, fa nentina fiara 404 baché indray izy, mifatotra rojovy, teny amin'ny Parkazy, fiantsonan'ny taxi-brousse, ary niantsoantso ireo polisy fa avoahy aty izany olona ambony miaro anareo izany, voatonona hatramin'ny anaran'ny vadin'ny Filoham-pirenena, raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ny olona any an-toerana, vao nentina tany Mahajanga i Mounzir Ajij Ali. Tamin'ny 11ora alina izy no nalefa teny amin'ny hopitaly.
Nampangain'ny polisy ho naniratsira azy ireo tamin'ny tambazotra serasera facebook i Mounzir Ajij Ali.
Nametraka fitoriana an'ireto polisy ireto moa ny tovolahy, ary nanao fitarainana hatrany amin'ny ministeran'ny fitsarana.
Natao ny fanadiadiana azy momba ity filakoana azy tao anaty biraon'ny Polisy ity, fa hatreto ireo polisy nampangainy ho nikasi-tanana azy, dia tsy mbola natao fanadiadiana ary milamina tsy misy arakaraka.
Amin'ny raharaha mahakasika polisy toy izao tokoa manko dia mila ny fanomezam-pahefana avy amin'ny minisitra mpiahy vao azo atao fanadihadiana ny polisy iray na maromaro.
Ny fahamarinana no andrasan'ny fokonolona eto Amatoboeny, izay nahita ny zava-misy nahazo an'ity mpandraharaha tanora eto an-toerana ity, fa tsy ny fiarovana sy fanaovana kiantrano an-trano hieren'ny olona mety nanao ny tsy mifanaraka amin'ny andraikitra tazonina, izay ny mijoro sy manampy amin'ny fisian'ny fandriam-pahalemana indray no lasa toy ny dahalo mpamono olona sy mpanolana, fa ny tena nanao ny asa ratsy indray no milamina afaka miriaria tsy amin-tahotra.